किन लम्बिदैछ लोकसेवा सम्बन्धी रिटको सुनवाई ? आउला त सोमबारै आदेश ? - A complete Nepali news portal based on news & views
किन लम्बिदैछ लोकसेवा सम्बन्धी रिटको सुनवाई ? आउला त सोमबारै आदेश ?
१६ असार २०७६, सोमबार ११:५० July 11, 2019 Nonstop Khabar
काठमाडौं । चार लाख बेरोजगारले रोजगारीका लागि लोकसेवा आयोगमा दिएको निवेदन अलपत्र छ । स्थानीय तहका लागि ९१६१ पदका लागि परेको आवेदन विभिन्न कारणसहित रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । एकातिर मिनि पार्लियामेन्टका रुपमा परिचित राज्य व्यवस्था समितिले गरेको निर्देशन मन्बालयले नमान्ने र अर्कातिर सर्वोच्चमा परेको रिटको फैसला छिटो नहुँदा आवदेकहरु अलमलमा छन्
विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर भएका पाँचवटा रिटको सुनुवाई सोमबार पनि हुँदैछ । आइतबार न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र डा आन्दनमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको रिटमा बहस नसकिएकाले सोमबारका लागि पेशी तोक्दै ‘हेर्दा हेर्दै’को सूचीमा राखिएको छ ।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार सोमबार बहस सकेर सोमबारै आदेश आउने सम्भावना रहेको छ । तर पटक पटक समय सर्दा अन्योल बढेको छ । आयोगले जेठ १५ गते आह्वान गरेको विज्ञापन संविधानले अंगिकार गरेको समावेशी सिद्धान्तअनुसार नभएको जिकिर गर्दै अधिवक्ताहरु जगदेव चौधरी, विकास ठाकुर र राजाराम घिमिरेले रिट दायर गरेका थिए ।
यसैगरी स्थानीय तहमा करार तथा अस्थायीमा कार्यरत १२१ जना कर्मचारीका तर्फबाट जनबहादुर बुढाले पनि रिट दायर गरेका थिए ।निवेदनमा लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६७ को दफा ११ (३०) बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिशतको आधारमा परिगणना गरी पुनः विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरिएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि छ । प्रदेशमा कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने कुराको जानकारी प्रदेशले राख्छ । तसर्थ संघीय सरकारले प्रदेशमाथि हस्तक्षेप गर्न नपाइने दावी रहँदै आएको छ । संविधानले पनि प्रदेशको अधिकारमा संघले हस्तक्षेप गर्न नपाउने उल्लेख छ । मन्त्री लालबाबु पंडित भने प्रदेशले लोकसेवा खडा नै नगरेकाले वाध्य भएर कर्मचारी पदपूर्तिका लागि संघ लागेको बताउँछन् । उनले संविधानको उल्लंघन नगरिएको दावी गरेका छन् ।
अदालतले यसबारे फैसला नगरेसम्म आवेदकहरुको भने ढुकढुकी बढिरहेको छ ।
महानगरको अनुदानमा प्रसूतिगृहले थाल्यो पीसीआर कोरोना परीक्षण
कोरोनाले पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जीको अवस्था गम्भीर
विराटनगरका ८ जना पत्रकारमा एकैदिन कोरोना संक्रमण
गोंगबु हत्याकाण्डमा सम्लग्न महिलालाइ प्रहरीले गर्यो सार्वजनिक
विवाहको नाटक गरेर युवतीको सुन र लाखौ नगद लुट्ने राजन पक्राउ
गोंगवुमा शव भेटिएका बोहराले दोहोरी खोल्ने भन्दै ऋण लिएकी महिला पक्राउ
लोकसेवाको तयारीमा रहेकालाई दुखको खबर, सरकारी सेवा प्रवेशको उमेर घटाउन प्रस्ताव पेश
चर्चित मोडल अञ्जली अधिकारी र मेलिना राईको पिरतिको खेती